ब’र्दि’या बा’घ का’न्ड बा”रे ब’न्यो प’हि’लो फि’ल्म ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/ब’र्दि’या बा’घ का’न्ड बा”रे ब’न्यो प’हि’लो फि’ल्म !
ब’र्दि’या बा’घ का’न्ड बा”रे ब’न्यो प’हि’लो फि’ल्म !
बर्दिया बा’घ का’न्ड बारे बन्यो पहिलो फिल्म !
काठमाडौं । सडक छेउमा रोकिएको एक कार हल्लिरहेको थियो । भारत, उत्तर प्रदेशको गोरखपुर सडक किनारमा रातो रंगको कार अचानक गोरखपुरको नक्षत्र क्षेत्रमा शनिबार साँझ समुद्री यात्राको नजिकै हल्लिन थाल्छ । यो देखेर त्यहाँ उपस्थित प्रहरी र अन्य मानिसहरु कारको नजिक पुगे ।भित्र हेर्दा, कारमा बसिरहेका प्रेमी जोडीहरू शा$रीरि$क सुखभो$गमा रमाइरहेका थिए । यसै बीच प्रहरीलाई देखेर उनीहरु गाडी लिएर भाग्न थाले ।”भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्”
दौडिरहेको बेला, कार सवारले दुई बाइक सवारहरूलाई ठक्कर पनि दिएका थिए । सोधपुछको क्रममा थाहा भयो कि ती युवती चिलुआताल क्षेत्रकी हुन् । चौरिचौरा बस्ने एक युवकसँग उसको प्रेम सम्बन्ध थियो । शनिबार उनी नौकायन सेन्टरमा आफ्ना प्रेमीलाई भेट्न गइन् ।तर यसै बीचमा उनीहरू दुवैले कारमा नै रमाउने सल्लाह लिन्छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को असरका कारण होटलहरु बन्द थिए । यसैले कारलाई नै आफ्नो ठान्ने निर्णय लिएको उनीहरुले बयान दिएका छन् । जब प्रहरीहरुले हस्तक्षेप गरे, तिनीहरू डराउन थाले ।इन्चार्ज खोराबर नासिर हुसेनले उनी कसैकी छोरी भएको र छोरीलाई उनकी आमासँगै घर पठाइएको जानकारी दिएका छन् । उक्त युवकलाई शान्तभंग आरोपमा चलान काटिएको छ ।”भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्”
थु’क्क मेरो जात !! जोवन चल्ने, भोजन नचल्ने (भिडियो हेर्नुहोस)
“झ’न्डै ३ क’रोडले हे’रिसकेको भि’डियोमा यि यु’वतीले के गर्दै छिन्”(भिडियो हेर्नुहोस)
बो’यफ़्रे’न्ड लाई प’ठाउ’न ब’नाए’को भि’डि’यो TikTok मा अ’पलो’ड हु’दा भिडियो भा’इर’ल….. (हेर्नुहोस भिडियो)